Sheeg Buugga Kushiinkaaga Qufulka Keto Slow Kusoo Bixinta - Mushaarka Jimicsiga
Home » Book » Sheeg Buugga Kushiinkaaga ee Kikriyo Qiiqa ah oo bilaash ah
Raadinta cunno karinno casho oo ketogenic ah oo aad ku diyaarin karto makiinada qunyar socodka ah? Hagaag waxaan idiin haynaa war weyn. Saaxiibkayaga Kelsey Ale wuxuu soo bandhigayaa buugyadeeda cusub Keto Slow Cooker cooker oo bilaash ah 500-kii qof ee ugu horreeyay! Buug-gacmeedkan waxaa ku jira quraac keto nafaqo leh, qado, iyo cunno karinno casho oo dhadhan fiican leh!
Gudaha jikada Keto Slow cooker, waxaad kahelaysaa 80 cunto kariye ah oo gubasho gaagaaban. Hoos waxaa ku jira qaar ka mid ah cuntooyinka ketogenic ee dhadhanka fiican ee aad samayn karto.
Ku dhawaad ​​dhammaan cuntooyinkaan loo yaqaan 'ketogenic' waxaa la sameyn karaa wax ka yar 15 daqiiqo sababta oo ah waxay adeegsadaan cunto kariye gaabis ah. Cunto kariye gaabis ah wuxuu kaa qaadaa culeys badan iyo madax xanuun ku lug leh karinta waxaana si aad ah kuugula talineynaa inaad mid iibsato hadaadan horey u laheyn qalabkaan keydinta waqtigaan.
Bixinta gunnada gaarka ah:
Hadaad dalbato maanta waxaad heli doontaa 3 hadiyado oo BILAASH ah! Ka sokow buugga Kartida Kunta Slow Klow Slow, waxaad ka heli doontaa seddexdaan hadiyadood oo ay ku jiraan amarkaaga:
The Hagaha bilowga ah ee Keto…
The Keto Karinta Cunnooyinka & Suuqa Iibsiga…
Oo Qorshaha Cuntada ee 7-maalmood iyo Liiska Wax iibsiga…
Ha sugin! Kusoo qaado koobiga buugga cuntada ee Keto Slow Cooker cooker naftaada maanta gabi ahaanba BILAASH! Waxa kaliya oo ay tahay inaad bixiso waa lacag yar oo ah rarida iyo haynta.
Riix Halkan si aad u dalbato Buugga Karinta Slow Klow Slow Karinta Kushiinka ah ee bilaashka ah
Miyaanad weli haysan makiinada wax ku kariya aayar? Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah kuwa wax ku karsada gaagaaban ee ugu sarreeya ee laga heli karo Amazon